အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုကိုနားလည်ခြင်း | အသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့အအရင်းအမြစ်များ | USAHello
အမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောက်ခွန်နှင့်အမှုအရာလုပ်နေတာ၏လမ်းရှိ. ဒါဟာအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့အရှုတ်ထွေးစေနိုင်သည်. အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအကြောင်းကိုဤအချက်အလက်သည်သင်ကိုအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်ကူညီပေးပါမည်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်တစ်ချိန်ကဗြိတိန်ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်. အတွက်အခမဲ့တိုင်းပြည်ဒါဟာဖြစ်လာခဲ့သည် 1776 အမေရိကန်တော်လှန်ရေးအပြီး. နောက်ထပ်ကြီးမားသောပဋိပက္ခပြည်တွင်းစစ်ကြီး လာ., အဆိုပါ 1860 အတွင်းမှာ. ပြည်တွင်းစစ်ကြီးအတွက်အမေရိကန်တွေအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်သော်လည်း, အာဖရိကမှယူဆောင်ခံခဲ့ရသောကျေးကျွန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အပါအဝင်. ကျွန်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်, နှင့်ဥပဒေများကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ကြသည်.
အမေရိကန်သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုအကြောင်းကိုသိရန်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အရာအမေရိကန်တွေအများအပြားနောက်ခံကနေလာကြခြင်းဖြစ်သည်. သာ Native Americans တွေ (လည်းခေါ်အင်ဒီးယန်း) အမေရိကကနေဘိုးဘေးဘီဘင်များ. အားလုံးသည်အခြားအမေရိကန်များကအခြားတိုက်ကြီးမှလာသောဘိုးဘေးဘီဘင်များ. သူတို့ထဲကအတော်များများဟာဒုက္ခသည်တွေအဖြစ် လာ. ,.
ထိုကြောင့်သမိုင်း၏, လူမျိုးရေးကိစ္စများအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု၌အရေးကြီးလှသည်. ပညတ္တိကျမ်းကလူအားလုံးအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်. ဒါပေမယ့်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးသောယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုများ၏တဦးတည်းအမေရိကန်တွေပြိုင်ပွဲအားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဝေယူကြောင်း. အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေကိုအမြဲလူဖြူကဲ့သို့တူညီသောအခွင့်အလမ်းများမရကြဘူး. အတော်များများက Non-အဖြူအမေရိကန်တွေအဖြူအမေရိကန်တွေထက်ဆင်းရဲတဲ့များမှာ.
အမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကအရမ်းဂုဏ်ယူ. အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်, တန်းတူအခွင့်အရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီ. အမေရိကန်တွေလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၏စိတ်ကူးကိုတန်ဖိုးထား. ဒါကသူတို့သမ္မတအကြောင်းကိုကြိုက်တယ်ဘယ်သို့ဆိုခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်. အစိုးရကသူတို့မကြိုက်ဘူးသောအရာတို့ကိုမရသောအခါသူတို့ကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ.
ပညတ္တိကျမ်းကိုအစိုးရကမည်သည့်ဘာသာတရားကိုမလိုကျရပါမညျနဲ့လူဟာသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ဦးအခွင့်အရေးရှိသည်ပြောပါတယ်. သို့သော်အများဆုံးအမေရိကန်တွေခရစ်ယာန်အားလပ်ရက်ဆင်နွှဲ. အကွောငျး 80% အမေရိကန်လူမျိုးသူတို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြသည်ဟုပြော, ထက်နည်းပါးလာပေမယ့် 40% ဘုရားကျောင်းကိုသွား. အစ္စလာမ်ဘာသာကဲ့သို့ပင်, ခရစ်ယာန်ဘာသာဘုရားသခင်တဆူတည်းအောက်ပါအတိုင်း. ဒါဟာသူတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းမျိုးဖြစ်နောက်လိုက်ပြောထားသည်နှင့်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအခြားသူများကိုကုသရန်.
သင်တစ်ဦးမွတ်စ်လင်ကျင့်သုံးပါလျှင်, သင်တစ်နေ့တာအတွင်းသင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုသင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်စကားပြောနှင့်ဆုတောင်းဖို့ရာအရပျအတှကျတောငျးဆိုနိုငျ. အတော်များများကကျောင်းများတွင်လည်းကျောင်းသားများကဆုတောင်းဖို့အတှကျအာကာသပေးသွားမှာပါ.
လူတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုများနှင့်အတူလာပြီအားဖြင့်၎င်း, ကြီးမားတဲ့အစားအစာများစားသုံးခြင်းအားဖြင့်အားလပ်ရက်ဆင်နွှဲ. အကြီးမားဆုံးအားလပ်ရက်ခရစ္စမတ်များမှာ (ဒီဇင်ဘာလ 25) နှင့်လွတ်လပ်ရေးနေ့နေ့ (ဇူလိုင်လ 4). လွတ်လပ်ရေးနေ့နေ့မီးရှူးမီးပန်းများနှင့်ကင်နှင့်အတူကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်. နှစ်သစ်ကူးအကြိုနေ့ (ဒီဇင်ဘာလ 31) အခြားကြီးမားသောအခမ်းအနားဖြစ်ပါသည်. နာရီသန်းခေါင်ရိုက်သည်အထိပြည်သူ့နှောင်းပိုင်းတွင်တက်နေဖို့နှင့်အချိန်ကိုဆင်းရေတွက်. ဟယ်လို (အောက်တိုဘာလ 31) ရယ်စရာအဝတ်၌ထဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာရှိသည်ဖို့တစ်ရက်အဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
မွေးနေ့များအလွန်အရေးကြီးလှသည်. အမေရိကန်တွေလက်ဆောင်များနှင့်အတူဆင်နွှဲ, ကိတ်မုန့်နှင့်အပါတီများမှ. ကလေးငယ်များနှင့်အတူမိသားစုများကိုမကြာခဏပါတီများရှိသည်နှင့်အိမ်နီးချင်းများဖိတ်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်, မွေးနေ့ဆင်နွှဲဖို့အတန်းဖော်နှင့်မိတ်ဆွေများ.
အဆိုပါအရင်းရှင်စီးပွားရေးကိုလူတွေဆိုလိုတယ် (မဟုတ်အစိုးရ) ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်. လယ်ယာစိုက်ပျိုးလွန်းအရေးကြီးပါသည်. အတော်များများကခြံကြီးတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကပိုင်ဆိုင်ကြသည်.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေရပ်ရွာကိုကူညီမလိုအပ်ပါ, ဒါပေမယ့်အများအပြားသည်ဒေသခံသို့မဟုတ်အမျိုးသားရေးပရဟိတလုပ်ငန်းမှအလှူငွေပါစေ. အမေရိကန်တွေကအဖွဲ့အစည်းတွေမှငွေအများကြီးလှူဒါန်း. အတော်များများကအသင်းတော်များနှင့်ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများအစားအစာများကို, အိမ်ရာ, နှင့်ဝင်ငွေနည်းမိသားစုများအခြေခံလိုအပ်ချက်များ.
သို့သော်အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးဦးချင်းဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကိုသတိထားမိပေမည်ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုမှာလူတွေကများသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့တိုးချဲ့မိသားစုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံ share ကြဘူးကြောင်း. သူတို့ကသူတို့ရဲ့တိုးချဲ့မိသားစုဝင်များသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကိုလှူဒါန်းသို့မဟုတ်ကူညီဖို့ရန်ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်မျှော်မှန်းထားသည်မဟုတ်.
အများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသုံးအမည်များရှိ: နာမည်, အလယ်နာမည်, နှင့်မိသားစုအမည်ဖြင့် (လည်းခေါ်နောက်ဆုံးအမည်). သူတို့လက်ထပ်ရသည့်အခါအများစုကအမျိုးသမီးတွေသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းရဲ့နောက်ဆုံးအမည်ယူ, အခြို့သောသူတို့ကိုယ်ပိုင်နောက်ဆုံးအမည်စောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးကိုသုံးပါပေမယ့်. သင်သည်သင်၏ကလေးသည်ထက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနောက်ဆုံးအမည်ရှိပါက, သင်ကလေးကသင့်ကလေးကိုကြောင်းအထောက်အထားပြသရန်လိုအပ်မည်အကြောင်း,.
သူတို့များစွာသောအခြားနိုင်ငံများတွင်လုပ်ပေးအဖြစ်အကွီးအကဲမြားကိုလေးစား၏တူညီသောအဆင့်အထိရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ပြည်သူ့တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခများပိုမိုလေးစားမှုပေးလေ့, စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေ, နှင့်ကြွယ်ဝတဲ့လူတွေ. ဤသည်အဟောင်းများအသစ်ရောက်ရှိလာသောများအတွက်ခက်ခဲညှိနှိုင်းမှုဖြစ်နိုင်သည်.
အချိန်များ၏ concept ကိုတင်းကျပ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဤအသစ်ရောက်ရှိလာသောနှင့်အတူရုန်းကန်သောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်. ပြည်သူ့အများဆုံးနေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်အချိန်မသတ်မှတ်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့နောက်တစ်နေ့ချိန်းဖို့သေချာပါသူတို့အချိန်ပေါ်စေစောစောဖြစ်ရပ်တစ်ခုချန်ထားမည်. အချိန်အလုပ်နှင့်ကျောင်း setting တွင်အထူးသဖြင့်အရေးပါသည်.
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပုံမှန်အားဖြင့်, ကိုယ်လက်လှုပ်. သို့သော်, အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုလက်နှင့်လှုပ်မှကျဆင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်လူတမထိရန်အဘို့အကအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်. ယောက်ျားကအရမ်းမကြာခဏအချင်းချင်းမထိကြဘူး, ဖြစ်နိုင်သည်တစ်ဦးအမြန်ပွေ့ဖက်, ကိုယ်လက်လှုပ်သို့မဟုတ် မှလွဲ.. သည်အခြားယောက်ျားတို့ထိဖို့အဆင်ပြေသည်. အမျိုးသမီးများအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်မထိဖို့ပိုများပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောသူတို့ပထမဦးဆုံးအခငျြးခငျြးကိုတွေ့မြင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့နှုတ်ဆက်လို့ပြောသောအခါတစ်ဦးပွေ့ဖက်အဖြစ်. မိသားစုဝင်များမကြာခဏတစ်ဦးချင်းစီကတခြားထိပွေ့ဖက်.
ပြည်သူ့နံနက်ယံ၌ကား "hi" လို့ပြောသို့မဟုတ်ပြုံးပေမယ့်နံနက်အခြားမိသားစုဝင်များနှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်တွေအများကြီးမယူကြဘူးဖြစ်နိုင်သည်. သင်ပထမဦးဆုံးအလုပ်မှာရောက်လာသည့်အခါသင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှုတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်. ပြည်သူ့ပြုံးနဲ့အများကြီး "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ဟုပြော.
အရေးအသားအရေးကြီးသောနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်. သငျသညျစာရွက်တစ်ရွက်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့လျှင်, ကလူကအရမ်းအလေးအနက်ထားစက္ကူယူပါလိမ့်မယ်. ဥပဒေရေးရာကန်ထရိုက်တရားရုံးကပြဌာန်းနိုင်ကျမ်းစာ၌ရေးထားစာရွက်စာတမ်းများလက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်.
ပြည်သူ့အများအားဖြင့်ငွေနှင့်အတူစား (အမဲချိတ်, ဓါးနှင့်ဇွန်း) သူတို့အသားညှပ်ပေါင်အစာစားကြသည်မဟုတ်လျှင်, ဟမ်ဘာဂါ, သို့မဟုတ်အစာရှောင်ခြင်းအစာအာဟာရ. သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီမုန့်ညက်အဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပန်းကန်များနှင့်ပန်းကန်ကိုသုံးပါမယ့်အစားတဦးပန်းကန်သို့မဟုတ်ပန်းကန်ဝေမျှ. သင်သည်သင်၏အိမ်တွင်ဧည့်ရှိပါက, သင်သည်ထိုသူတို့သီးခြားပန်းကန်ပေါ်တွင်သူတို့အစာကိုမပူဇော်နိုင်ပါတယ်. အစားအစာလူမျိုးရေးသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးအဘို့ဖြစ်၏လျှင်သင်မသေချာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်မေးနိုင်ပါတယ်.
ကလေးအားလုံးအသက်အရွယ်ကနေကျောင်းကိုသွားရရှိရမည်5သို့ 18. အများစုမှာဆရာ, ဆရာမအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြ, ဒါပေမယ့်အများကြီးယောက်ျားကလေးများသင်ပေး, လွန်း. ကျောင်းများမိဘများဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့ပညာရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရနျမြျှောလငျ့. ဒါကကျောင်းမှာအစည်းအဝေးများသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များတက်ရောက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်. ဒါဟာကျောင်းသားများကိုအိမ်စာဖြည့်စွက်ရန်အချိန်ပေးခြင်းကိုဆိုလိုသည်, သူတို့ကိုသင်ယူဖို့ကူညီခြင်း. အမေရိကန်မိဘများလည်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ကျောင်းအတွက်ကူညီပေးရန်.
သင်၏သားသမီးတို့သည်အုပ်စုများနှင့်အဖွဲ့များအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့သင်ယူပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကကောလိပ်ကျောင်းများအတွက်စစ်ဆေးမှုများကိုပါအောင်မြင်မှလေ့လာဦးမည်. အမေရိကန်ကျောင်းများတွင်ကလေးများပြင်းထန်စွာထင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ. ပြင်းထန်စွာစဉ်းစားကျောင်းသားများကိုစိတ်ကူးများမေးခွန်းထုတ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်. ရလဒ်အနေဖြင့်, ကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏မိဘများမေးခွန်းထုတ်ရန်စတင်စေခြင်းငှါ. ဒါကမလေးစားတဲ့၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုမဟုတျပါဘူး. ဒါဟာသူတို့ကျောင်းနှင့်အလုပ်အတွက်အောင်မြင်ဖို့အရေးပါတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူကြပါပြီပြသ.
လူအတော်များများဟာနှစ်စဉ်စစ်ဆေးမှုများ-ups များအတွက်ဆရာဝန်သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်အစားသူတို့ကနေမကောင်းဖြစ်ရုံတဲ့အခါမှာ. ဆရာဝန်များကအလွန်လေးစားကြသည်.
ကနျြးမာရေးလုပ်သားသင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်အကြောင်းအရာကိုသင်တို့ထံသို့စကားပြောရန်မည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သူတို့ရိုင်းစိုင်းဖြစ်ခြင်းနေကြသည်ဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုဤမယူကြဘူး. ပညတ္တိကျမ်းလူနာခွင့်ပြုချက်ပေးမယ့်ပုံစံကိုလက်မှတ်ထိုးမဟုတ်လျှင်သူတို့အခြားလူများနှင့်အတူလူနာရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆှေးနှေးဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပြောပါတယ်.
တိုင်ပင်မှူးမတ်ကောင်းစွာလေးစားကြသည်. အမေရိကန်များမိသားစုဝင်တစ်ဦးသေဆုံးသို့မဟုတ်အခြားဝမ်းနည်းနဲ့ Hard ဖြစ်ရပ်များမှတဆင့်သူတို့ကိုကူညီမယ့်တိုင်ပင်ကြည့်ရှုရန်အဘို့အဒါဟာအလွန်ဘုံဖြစ်ပါသည်. နီးပါးတိုင်းကျောင်းကကျောင်းသားရဲ့မိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကိုကူညီမယ့်တိုင်ပင်ထားသည်, ထိုကဲ့သို့သောကောလိပ်သွားအဖြစ်. သင့်ရဲ့ကျောင်းသားတစ်ဦးတိုင်ပင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါက, ဒီသင့်မိသားစုများအတွက်ကြီးမားသောအကူအညီနိုင်ပါတယ်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်အနုတ်လက္ခဏာဘာမှမဆိုလိုပေ.
US မှာ, သင်သာလူတစ်ဦးမှလက်ထပ်ရနိုင်. မယားအမြားယူပညတ္တိကျမ်းဆန့်ကျင်. ကွာရှင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဘုံများနှင့်လက်ခံဖြစ်ပါသည်.
လူအများစုဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များနှင့်အတူသာအသက်ရှင်နေထိုင် - မိဘများနှင့်ကလေးများနှင့်တခါတရံတွင်အဘိုးအဘွား. သူတို့ရဲ့တိုးချဲ့မိသားစုများနှင့်အတူမိသားစုများကသာသေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းနထေိုငျ. ပိုရိုးရာလူ့အဖွဲ့အစည်းကနေအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့အပါဆုံးသိသာယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်.
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအိမ်ထောင်စုရန်အရေးကြီးပါသည်များမှာ. အများစုမှာအမျိုးသားများထိုကဲ့သို့ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ကလေးများစောင့်ရှောက်တာအဖြစ်အိမ်ထောင်စုအိမ်မှုဝေယျာနှင့်အတူကူညီ. ဤအအိမ်မှုဝေယျာလုပ်ပေးသူကိုယောက်ျားနေဆဲ၎င်းတို့၏နေအိမ်များတာဝန်ခံအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်.
အများစုမှာမိသားစုများကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်. လူအတော်များများ daycare ၎င်းတို့၏ကလေးများပေးပို့ဖို့ပေးဆောင်. ဒါဟာကြီးကြပ်မှုမပါဘဲတစ်ဦးတည်းအိမ်ကကလေးတွေစွန့်ခွာရန်အကျင့်တရားနှင့်ဆန့်ကျင်. ဒါဟာ hit သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလေးများဆုံးမသောဖို့ပညတ်တိကမျြးဆန့်ကျင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်.
US မှာ, အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအသကျရှငျ, အလုပ်, အတူတူကျောင်းသွားရ. ဤသည်အချို့သောအသစ်ရောက်ရှိလာသောများအတွက်အကြီးမားဆုံးယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်. ယောက်ျားမိန်းမတို့လည်းလူမှုရေးဖြစ်ရပ်များမှာရောထွေး. ဒါပေမယ့်သင်ကတူညီတဲ့လိင်၏ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိသည်ဖို့တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်.
မိန်းကလေးများကိုယ့်ယောက်ျားလေးနဲ့တူ၎င်းတို့၏ပညာရေးနှင့်အတူဆက်လက်. အမေရိကန်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအိမ်မှုဝေယျာနှင့်အတူကူညီနှစ်ဦးစလုံး. သူတို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူများမှာသို့မဟုတ်လက်ထပ်ရသည်အထိအမေရိကန်မိန်းကလေးငယ်အိမ်ထောင်စု run ဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်မဟုတ်.
US မှာ, သူတို့ menstruating နေစဉ်အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များနေဆဲအလုပ်နှင့်ကျောင်းသွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်.
အမျိုးသမီးများပုံမှန်အားဖြင့်လူကဲ့သို့အိမ်ပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်. အမျိုးသမီးအများစုဟာတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ပတ်အကြာတွင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သူတို့ရဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်မှုယူ. အလုပ်ရှင်များရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အမရတဲ့အချိန်ကိုချွတ်ပေးရမည်, ထိုအခါမူကားသူတို့သည်မိန်းမကဲ့သို့အမြန်ဆုံးအဖြစ်အလုပ်ပြန်သွားဖို့ကိုမျှော်လင့်.
တချို့ကအသစ်ရောက်ရှိလာသောသူတို့ကအမေရိကန်လုပ်သားအင်အားအဘို့မဆိုကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလို့ပြော. ဒါမမှန်ဘူး. အတော်များများကအသစ်ရောက်ရှိလာသောတစ်ဦးထက်ပိုဘာသာစကားမပြောတတ်. သူတို့သည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသောကြောင့်, သူတို့ကခွန်အားဖြစ်ကြ၏. အများစုကအသစ်ရောက်ရှိလာသောတန်ဖိုးကိုသင်ယူမှု. သူတို့ကလေ့လာဖို့နဲ့ Hard လုပ်ကိုင်ဖို့လိုလိုလားလားရှိ. အသစ်ရောက်ရှိလာသောအရေးကြီးသောပံ့ပိုးမှုများကိုအောင်. အလုပ်မှာသငျသညျအလုပျကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုအရင်းအမြစ်များကိုသုံးပါနှင့်အောင်မြင် ကျေးဇူးပြု..
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် - ဝိကိပိဒိယမှသတင်းအချက်အလက်